हेलम्बु र चेपाङलाई जोड्ने त्यो रातो झोला ! | Aaja ko Shiksha
समाचार , मुख्य समाचार , फिचर
पुसको ठिही र छोटो दिन । घाम ढल्कँदै थियो । चम्किलो किरण फिकामा मलिन हुँदै गर्दा मनहरि नदीको किनार नजिक एकसरो निलो पोशाकमा बालबालिका पलेँटीबद्ध थिए । तिनका मुहारमा चाहिँ आशा र खुशीका किरण झल्किरहेथ्यो ।
मकवानपुर जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रमध्ये राक्सीराङ गाउँपालिका चैनपुरमा रहेको एउटा विद्यालयमा हेलम्बु एजुकेसन एण्ड लाइभ्लीहुड पार्टनरसिप (हेल्प) संस्थाका स्वयंसेवीहरु रातो झोला लिएर जब पुगे, वातावरण एकाएक गडगडाहट तालीमा गुञ्जायमान भयो । त्यो रातो झोला ‘बाँडिदिऊ न त’ भन्दिए जस्तो केवल औपचारिकतामा सीमित थिएन । यो त अभियान थियो । हेलम्बुबाट थालिएको विशुद्ध शैक्षिक अभियान । सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी गेहनाथ गौतमको पहलमा सोही जिल्लाको भीमटारमा माझी र दनुवार समुदायका विद्यार्थीलाई हेल्पबाट सहयोग गरेर थालिएको अभियान थियो यो । सिङ्गो सिन्धुपाल्चोकदेखि शुरु भएर यतिबेला पर्वत, पाल्पा, गोर्खा र मकवानपुर हुँदै प्यूठानसम्म यो पुगिसकेको छ ।
नयाँ वर्ष २०१९ को पूर्वसन्ध्यामा यो टिम चेपाङ बाहुल्य क्षेत्र ‘स्कूल इन अ ब्याग’ अर्थात् स्कूलमा रातो झोला अभियान लिएर पुगेको थियो । विद्यार्थीमा धेरैजसो चेपाङ जाति र केही चाहिँ अरु समुदायका देखिन्थे । नामै प्रजा जागृति आधारभूत विद्यालय । जहाँ चेपाङ विद्यार्थी अत्यधिक हुने नै भए । प्रजा चेपाङको एउटा थर हो । शिक्षकका अनुसार यो विद्यालयमा ८० प्रतिशत चेपाङ विद्यार्थी छन् ।
के छ त त्यो रातो झोलामा ? यो जिज्ञासा मेटाउन हेल्पका स्वयंसेवीले पहिला त झोलाभित्र रहेका सामग्रीबारे विद्यार्थीलाई जानकारी दिए । दिनभरी विद्यालयमा समय बिताउनुपर्ने विद्यार्थीका लागि उसको झोलामा किताब मात्र भएर पुग्दो रहेनछ । खाजा खाएपछि पानी पनि पिउनै पर्यो । बोत्तल त चाहिन्छ–चाहिन्छ । त्यसो त, घरमा बिहान उठ्नेबित्तिकै नित्य कर्म गर्दा चाहिने सामग्रीसमेत झोलामा देख्दा कलिला विद्यार्थी दङ्ग परे । रातो झोलाभित्र पेन्सिल–कपी त छँदैथिए । ज्यामिती बक्स, एउटा लामो स्केल, ड्रइङ्ग कपी, दुई प्याकेट बल पेन अनि कलर पेन्सिल थप थिए । शरीर स्वस्थ राख्नका निम्ति अत्यावश्यक एक थान दन्त मञ्जन, दाँत माझ्ने ब्रस, साबुन, रुमाल, काँगियो, नेल–कटर, अनि पानी पिउने बोतल पनि राखिएका रहेछन् । बालकक्षादेखि ८ सम्मका २९४ जना विद्यार्थीले यस्तो बहुआयमिक सामग्रीसहितका रातो झोला पाए ।
भन्दिनेले त ‘विद्यालयमा झोला बाँड्ने त हो नि !’ भन्लान् । ‘स्कूल इन अ ब्याग’ अभियानलाई सामान्य ठानिएला पनि । तर, यसमा मानवीय भावना र लक्ष्य ज्यादै प्रगाढ भएर गाँसिएको छ । ‘म ती बालबालिकाका निर्दाेष अनुहारमा एकछिन भएपनि खुशी छाएको हेर्न सधैं लालयित हुने गर्छु,’ हेल्पका कार्यकारी निर्देशक जिमी लामा भन्नुहुन्छ, ‘रातो झोलाभित्र भरिएका शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने काम त एक निश्चित समयमा समाप्त हुनेछ तर झोला पाउने प्रत्येक विद्यार्थीभित्रको रङ्गीन र असीमित भविष्यलाई खोजतलास गर्ने प्रेरणा भने धेरै लामो समयसम्म टिक्नेछ ।’ हुन पनि, हेलम्बुको नकोते–सेर्माथाङ्गमा हुर्की पढी दुःख–कष्टलाई भोगेर संघर्षका साथ बेलायतबाट स्नातकोत्तर हासिल गरेको आफ्नो विगतलाई उहाँ स्मरण गर्नुहुन्छ । यत्तिका संख्यामा त्यत्रो १५–१६ किसिमका सामग्रीसहितका हजारौं झोला तयार पार्न कम खर्च लाग्दैन । प्रतिविद्यार्थी नै १५ सय रुपियाँको हाराहारीमा लागत लाग्दो रहेछ । यही रकम जोड्न विदेशी दातालाई ‘कन्भिन्स’ गर्दै अझ उनीहरुलाई समेत अभियानमा सँगसँगै हिँडाउनु चानचुने कुरा छैन नै ।
हेल्पको ‘हेल्प’बाट खुबै खुशी हुनुभएका राक्सीराङ्ग गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले भन्नुभयो, ‘सहयोगका लागि मकवानपुरमा धेरै मान्छे र संस्थाहरु आए तर हेटौडा र राजमार्गभन्दा माथि यो क्षेत्रमा कहिल्यै आएनन् । आज हेल्पले यस्तो महत्वपूर्ण सहयोग यहाँसम्म आएरै गरिदियो । म निकै आभारी छु उहाँहरुप्रति ।’
यसरी यी कलिला विद्यार्थीसँग खुशी साट्न थालेको पनि हेल्पले झण्डै एक दशक बिताएको छ । सन् २००९ बाटै शिक्षाका लागि काम शुरु गरेको हेल्पले २०१२ बाट भने स्कूल–स्कूलमा रातो झोला वितरण अभियान थालेको हो । मूलतः विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सघाऊ पुर्याउनु, ड्रप–आउट (बीचैमा पढाइ छोड्ने) दर घटाउनु र शैक्षिक सामग्रीमार्फत् शिक्षामा गुणस्तर बढाउनु यो अभियानको उद्देश्य हो । अहिलेसम्म झण्डै १५ हजार विद्यार्थीलाई यस्ता स्कूल ब्याग हेल्पले बाँडिसकेको छ । हालसम्म वितरण गरिएका १५ हजार थान स्कूल ब्यागमध्ये गएको तीन महिनामै हेल्पले ५ हजार विद्यार्थीलाई रातो झोला उपलब्ध गराएको थियो । हेल्पको स्कूल इन अ ब्याग अभियानमा विदेशबाट समेत धेरै स्वयंसेवी मिसिनुभएको छ । पछिल्लो ब्याग वितरणको आर्थिक जोहो गर्न यो अभियानसँग जोडिनुभएका बेलायती नागरिक एड प्रेटले एक वर्ष लगाएर एक पांग्रे साइकलमार्फत् विश्व भ्रमण गर्नुभएको थियो । प्रजा जागृति आधारभूत विद्यालयमा ब्याग बाँड्न अर्का बेलायती नागरिक हान्ना गान्टलेट पनि पुग्नुभएको थियो । विद्यार्थीलाई ब्याग बाँड्न व्यस्त हुँदै गर्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘हेल्पको यस्तो गजबको काममा सामेल हुन पाउँदा साह्रै खुशी लागेको छ ।’
यो कार्यक्रमले यसरी निरन्तरता पाउनुमा राजनीतिक नेतृत्व र सामाजिक व्यक्तित्वदेखि मिस नेपालसम्मको प्रेरणादायी भूमिका देखिन्छ । चेपाङ्ग समुदायमा जाँदा यो वर्षकी मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडाले उत्साहप्रद प्रेरणा दिनुभएको हेल्पका कार्यकारी निर्देशक लामा बताउनुहुन्छ । चेपाङ समुदायका लागि यस क्षेत्रमा सामाजिक काम गरिसक्नुभएकी श्रृंखलाले हेल्प टिमलाई झोला अभियानका निम्ति शुभकामना दिनुभएको थियो । त्यसो त, संघीय सांसद एवं कांग्रेस युवा नेता गगन थापा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी डा. गोविन्दराज पोखरेल पनि अभियानमा आफैं सरिक भई हौसला दिने गर्नुहुन्छ । सांसद गगन थापा भन्नुहुन्छ, ‘कोही पनि बालबालिका विद्यालय आउनबाट बञ्चित हुनु हुँदैन । तसर्थ यो स्कूल ब्याग कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई विद्यालय आउन आकर्षण गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’